Ndezvipi Zvinorehwa Nevanodiwa MuBhaibheri? - Zvinoreva Zvemubhaibheri
nyati inotaurwa mubhaibheri
haikwanise kuwana voicemail pane iphone
iphone yangu haina kuzodzorera
nyowani inotakura yekuvandudza t nhare
sei yangu iphone 5s ichishandisa yakawanda data
Ndezvipi Zvinorehwa Nevanodiwa MuBhaibheri?
Chii chinorehwa neMudiwa muBhaibheri?. Mu Testamente Yekare , izwi rekuti mudiwa rinoshandiswa rakadzokororwa mu Rwiyo Rworwiyo , sevanhu vachangoroorana vanoratidzira kudanana kwavo kwakadzama (Rwiyo rweNziyo 5: 9; 6: 1, 3). Mune ino kesi, mudiwa zvinoreva kudanana . Nehemiya 13:26 inoshandisawo izwi rekuti Anodiwa kurondedzera Mambo Soromoni se anodiwa naMwari wake (ESV). Muchokwadi, pakuberekwa kwaSoromoni, nekuti Ishe vaimuda, akatumira shoko kuburikidza nemuporofita Natani zita raJedhidhiya (2 Sameri 12:25). Jedidhiya zvinoreva kudiwa naIshe.
Nezvikonzero izvo zvaanoziva chete, Mwari anomanikidza rudo chairwo kune vamwe vanhu uye anovashandisa nenzira yepamusoro kupfuura iyo inoshandiswa nevamwe. Israeri inowanzodaidzwa kuti inodikanwa naMwari (semuenzaniso, Dhuteronomi 33:12; Jeremia 11:15). Mwari akasarudza iri boka revanhu seVanoda vake kuti avapatsanure kubva kuhurongwa Hwake hwoumwari hwekuponesa nyika kubudikidza naJesu (Dhuteronomi 7: 6–8; Genesi 12: 3).
Izwi rekuti mudiwa rinoshandiswa zvakare kakawanda muTestamente Itsva yese.
Kushandiswa kunooneka kweshoko iri murubhabhatidzo rwaJesu. Muchiitiko ichi, vanhu vatatu veTiriniti vanoratidzwa. Mwari Baba vanotaura neMwanakomana kubva kudenga: Uyu ndiye Mwanakomana wangu wandinoda, wandinofarira (Mateo 3:17; Mako 1:11; Ruka 3:22). Ipapo, Mweya Mutsvene wakaburuka senjiva ndokumhara paari (Marko 1:10; Ruka 3:22; Johane 1:32).
Mwari zvakare vanodana Jesu anodiwa paGomo reKushandurwa: Uyu Mwanakomana wangu anodikanwa, wandinofarira; muteerere (Mateo 17: 5). Tinogona kudzidza zvishoma nezvehukama hwerudo hwakagovaniswa naBaba, Mwanakomana neMweya Mutsvene pakushandiswa kweshoko rinodiwa raMwari. Jesu anodzokorora chokwadi ichocho muna Johane 10:17 paanoti:
Vazhinji vanyori veTestamente Itsva vakashandisa chirevo Anodiwa kunyorera avo vanogamuchira tsamba dzavo (semuenzaniso, VaFiripi 4: 1; 2 Vakorinte 7: 1; 1 Petro 2:11). Kazhinji yenguva, izwi rechiGiriki rinoshandurwa seanodikanwa ndiagapētoi, rinoenderana neshoko rekuti agape. Mutsamba dzakafemerwa, Vanodiwa zvinoreva shamwari dzinodiwa naMwari. MuTestamente Itsva, kushandiswa kweshoko rekuti mudiwa kunoreva zvinopfuura rudo rwevanhu. Inoratidza kuremekedza vamwe kunouya kubva mukuziva kukosha kwavo sevana vaMwari. Avo vakatungamirirwa vaipfuura shamwari chete; vaive hama nehanzvadzi muna Kristu uye nekudaro vaikosheswa zvikuru.
Sezvo Jesu ari iye anodikanwa naMwari, Anodiwa anoshandiswawo sezita raKristu. Pauro anotaura nezvekuti vatendi ndivo vanobatsirwa sei nenyasha dzinobwinya dzaMwari, dzaakatikomborera nadzo muna Anodiwa (VaEfeso 1: 6, Bhaibheri Dzvene). Baba vanoda Mwanakomana, uye Ivo vanotida uye vanotiropafadza nekuda kwekunakira kweMwanakomana.
Vese vakagamuchirwa mumhuri yaMwari kuburikidza nekutenda mune rakapedzwa basa raJesu Kristu vanodiwa naBaba (Johane 1:12; VaRoma 8:15). Irwo rudo runoshamisa uye rwoumbozha: Tarisa rudo rukuru rwatakaitirwa naBaba, kuti tinzi vana vaMwari! Uye ndizvo zvatiri! (1 Johane 3: 1). Nekuda kwekuti Mwari akadurura rudo rwake patiri, isu takasununguka kushandisa mazwi eRwiyo rweNziyo 6: 3 kuhukama hwedu naKristu: Ini ndiri wemudiwa wangu, uye mudiwa wangu ndewangu.
Jesu ndiye musimboti werudo rwaMwari.
Kristu Mwanakomana anodiwa waBaba uye, nekudaro, chishuwo chevose vanoda Mwari. Jesu anozokwezva vese vanoda Mwari. Kristu akapa hupenyu hwake kune mumwe nemumwe wedu, achideura ropa rake rakakosha pamuchinjikwa weKarivhari. Akazviitira RUDO. Kuratidzira kwevaRoma kwaizivikanwa sehutsinye. Ivo kazhinji vaive nemakumi matatu nemapfumbamwe maronda. Musoja aishandisa tyava ine micheka yeganda yakarukwa nezvidimbu zvesimbi zvakarukwa.
Kana chikwapuro chikarova nyama, zvidimbu izvi zvakakonzera mavanga kana mavanga, ayo akavhurika pamwe nekumwe kurova. Uye tambo yacho yaive zvakare nezvidimbu zvakapinza zvefupa, zvaicheka zvakanyanya nyama. Musana wacho wainge wabvaruka zvekuti musana dzimwe nguva waionekwa nekuda kwekucheka kwakadzika kudaro. Iyo shamhu yakaenda kubva pamafudzi kuenda kumashure uye makumbo. Sezvo kurohwa kwakapfuurira, kurohwa kwakabvaruka kusvika kutsandanyama uye kwakaburitsa kubvunda kwekubvunda kwenyama inobuda ropa.
Tsinga dzemunhu akabatwa dzakaburitswa, uye tsandanyama dzakafanana, tsinga uye ura zvakavhurwa nekufumurwa. Yese tyava yaakagamuchira mumuviri wake, yaive nekuti aikuda, akazviitira RUDO. Akazviisa panzvimbo yako.
VaEfeso 1: 6
Zvinodikanwa nemarudzi ese (Hagai 2: 7) mudiwa waJehovha (Zekariya 13: 7).
SAPPHIRE ZVINOREVA MUBHAIBHERI
Munhenga Zvinoreva MuBhaibheri - Rudo Uye Dziviriro
Zvinorevei kuti Mwari ndiJehovha-Rapha muBhaibheri?
ZVIREVO ZVEMAHARA MUBHAIBHERI